Faah faahin laga bixiyay qaraxii ka dhacay Muqdisho – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Faah faahin laga bixiyay qaraxii ka dhacay Muqdisho
Faah faahin laga bixiyay qaraxii ka dhacay Muqdisho
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay qaraxii Caawa ka dhacday Degmada Xamar weyne, isla markaana laga maqlay qeybo ka mid ah Magaalada Muqdisho.
Taliye ku-xigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sakiyo Xuseen, ayaa sheegtay in gaariga qarxay Caawa uu ahaa Noah,isla markaana la dhigay meel barxad ah kuna taala dhabarka dambe ee Iskaashatada Gadiidka oo ku taalla Degmada Xamar weyne.
Waxa ayna sidoo kale sheegtay in qaraxa uusan geysan wax Khasaaro ah.
“Abbaro 7dii habeenimo ayaa baabuur noociisa yahay Toyota Noah ku qarxay meel barxad ah oo la dhigay kuna taal dhabarka dambe ee iskaashatada gadiidka degmada Xamar Weyne” ayey tiri Sakiyo Xuseen
“Sidaanu xaqiijinay wax qasaaro naafeed ama dhaawac ma jiraan. Waxaa isla goobta lagu qabtay 2 qof lagu tuhmaaya in falka lug ku leeyihiin iyo ninkii baabuurka qaraxa watay. Wixii soo kordha waan idinla soo socodsiin doonaa” ayey tiri General Sakiya.
Previous articleDeg Deg:-Qarax Gaari oo goordhaw ka dhacay Muqdisho
Next articleMas’uuliyiin katirsan Dowladda oo Kenya laga soo Celiyay
Guddoomiyaha Aqalka sare oo booqday xarunta Wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed
Tiradii ugu badneyn oo la helay COVI19 Itoobiya